Onix စျေး - အွန်လိုင်း ONX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Onix (ONX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Onix (ONX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Onix ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $9 476.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Onix တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Onix များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OnixONX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00585OnixONX သို့ ယူရိုEUR€0.00497OnixONX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00449OnixONX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00534OnixONX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0523OnixONX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.037OnixONX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.13OnixONX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0219OnixONX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00775OnixONX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00817OnixONX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.131OnixONX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0454OnixONX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0318OnixONX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.438OnixONX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.986OnixONX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00803OnixONX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0089OnixONX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.182OnixONX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0406OnixONX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.626OnixONX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.93OnixONX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.24OnixONX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.432OnixONX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.161
OnixONX သို့ BitcoinBTC0.0000005 OnixONX သို့ EthereumETH0.00002 OnixONX သို့ LitecoinLTC0.000108 OnixONX သို့ DigitalCashDASH0.00006 OnixONX သို့ MoneroXMR0.00007 OnixONX သို့ NxtNXT0.457 OnixONX သို့ Ethereum ClassicETC0.000863 OnixONX သို့ DogecoinDOGE1.69 OnixONX သို့ ZCashZEC0.00007 OnixONX သို့ BitsharesBTS0.18 OnixONX သို့ DigiByteDGB0.187 OnixONX သို့ RippleXRP0.0208 OnixONX သို့ BitcoinDarkBTCD0.000202 OnixONX သို့ PeerCoinPPC0.0194 OnixONX သို့ CraigsCoinCRAIG2.67 OnixONX သို့ BitstakeXBS0.25 OnixONX သို့ PayCoinXPY0.102 OnixONX သို့ ProsperCoinPRC0.734 OnixONX သို့ YbCoinYBC0.000003 OnixONX သို့ DarkKushDANK1.88 OnixONX သို့ GiveCoinGIVE12.68 OnixONX သို့ KoboCoinKOBO1.33 OnixONX သို့ DarkTokenDT0.00539 OnixONX သို့ CETUS CoinCETI16.91